Daawo: Madaxweyne Muuse biixi oo hadal ka jeediyey xafladii kulankii afurka iyo cashada ahayd ee madaxtooyadu ku casuuntay culumada Somailland ayaa sheegay inay muhiim tahay in qofka kaste denbiguu galo lagu qaado darajaduu doono ha lahaadee | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo: Madaxweyne Muuse biixi oo hadal ka jeediyey xafladii kulankii afurka iyo cashada ahayd ee madaxtooyadu ku casuuntay culumada Somailland ayaa sheegay inay muhiim tahay in qofka kaste denbiguu galo lagu qaado darajaduu doono ha lahaadee
Published on May 13, 2019 by sdwo · No Comments
Waxa ka mid ahaa hadaladii madaxeynaa in nabada dalka iyo amingaba si wada jira loowada ilaaliyo. cidii Khalkhal gelinaysa dalka xilikii kaste oo ay hayso in gacan bir ah lagu qabto. Qofka xilka hayaa fidnada uu bilaabaa way ka weyntahay qofka caadig ah ee aan xilka haynin.
Hadii qof denbigalo ama uu dhibaato geysto ilaa madaxweyne haduu yahay impiijment baa la saarayaa, haduu wasiir yahay waa la qabanayaa, hadii uu yahay xildhibaani qarankii kala duminayana xeer baaynu ka dhiganay oo waa la qabanayaa. Inaynaan noqon dowlad dadka danyarta uun ku qabata denbiga ka madaxda ahi markuu denbi geystana ka daaysa.